Igumbi elihle kufutshane neVaucelles Abbey - I-Airbnb
Igumbi elihle kufutshane neVaucelles Abbey
Igumbi lakho lokulala e indlu sinombuki zindwendwe onguCatherine
Indlu yethu (kufutshane neAbbey of Vaucelles kunye neLouis XXI manor) yimizuzu eyi-10 ukusuka eCambrai 59, kwimizuzu eyi-5 ukusuka kwi-A26 motorway (phuma kwi-9 Cambrai/Masnières). Uza kuyixabisa ngenxa yokuzola kwayo, indalo (iindlela ezininzi zokunyuka intaba kwintlambo iHigh Imperldt), indalo. Ilungele abantu abathandanayo, abahamba bodwa nabahamba ngezoshishino.
Iibhayisikile eziyi-5 ziyafumaneka xa kuhanjwa indalo.
Amanye amagumbi amabini aqeshiswayo, kodwa alawulwa ngokuzimeleyo. Uza kuyifumana ngokuthi "jonga ezinye izimvo".
uza kukuvuyela ukuzola kwale ndawo (indlu eyi-70 m ukusuka kwindlela kawonke-wonke), indawo ekhethekileyo, izibane, izilwanyana zasendle ngenxa yokuba kufutshane nomjelo (5 m) xa, imozulu ivuma, uza kuba nekofu yakho kwintente...
isitrato esithuleyo sasedolophini (sisebenza kuphela kubahlali basekuhlaleni)
Yiya kwindawo yokungena, indlu yethu isezantsi, kufutshane nomjelo.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Les Rues-des-Vignes